Accueil > Gazetin'ny nosy > Doudou DFP: “Aoka ny olona tsy miandany atsy na aroa no ho PM”
Doudou DFP: “Aoka ny olona tsy miandany atsy na aroa no ho PM”
Nnao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety omaly alarobia faha 30 may 2018 ny fikambanana DFP (Dinika ho an’ny fampihavanam-pirenena) izay tarihin’ingahy Maharavo Tolojanahary fantatra ny maro amin’ny anarana hoe Doudou.
Nivoaka tamin’ny fahanginany ity mpitarika ny fanarenana ifotony amin’ny fanavotana ny firenena ity. Nambaran’izy ireo sy ny mpomba azy fa mifanohitra ny fanapahan-kevitry ny HCC (Fahefana avo momba ny Lalàmpanorenana) amin’iny didy navoakany iny. Nefa na izany aza dia manakaiky ny filazan’ny HCC mahakasika ny antsoiny hoe “accord politique” na ny fifanarahana ara-pôlitika ny hevitry ny DFP. Voalazan’ingahy Doudou fa tsy azo antoka ny fisian’ny fanovana sy ny fifidianana madio raha izao fanendrena governemanta sy praiminisitra izao no halalinina satria miandany be loatra amin’ny olon’antoko.
Tokony ho olona tsy mpanao pôlitika na miandany amin’ny antoko atsy sy aroa na koa ireo fikambanana izatsy sy zaroa no hapetraka amin’ny praiminisitra izao.
Ho an’ny DFP dia ny miaramila no tokony handray an-tanana ny fanendrena ny olona ho praiminisitra ao anatin’ny fotoana fohy ka hitarika amin’izao fanovana izao.